काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उपभोक्ताले आफूलाई कुनै सेवा उपभोग गर्दा कुनै प्रकारको हानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ताका लागि गएको विधेयकमा कुनै उत्पादक वा सेवा वितरकका कारण स्वास्थ्य तथा अन्य कुनै पनि किसिमका हानी–नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पनि माग्न सक्ने र प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा दायर हुने भएका छन् । हाल जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने र बदमासी गर्नेले तत्कालै सजाय नपाउने अवस्था छ । अब उपभोक्ता अदालत मार्फत नै उपभोक्ता हितसँग जोडिएका मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ । यस्तै प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ताले खरिद गरेको समानमा कैफियत भेटेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । अहिले बिक्री भएको सामान फिर्ता लिन प्रायः व्यवसायीले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले उपभोक्ताको अधिकारलाई बलियो बनाउन उत्पादक, सेवा प्रदायक र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन यस किसिमको व्यवस्था सहितको ऐन प्रस्ताव गरिएको बताए । यसले विकास निर्माणको काम गर्दा धुलो धेरै उडेर स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा प्रमाण सहित क्षतिपूर्तिको दावी पेश गर्न सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा रहेका विभिन्न तहका विचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी विभिन्न प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयकमा बजारमा सरकारले नै आपूर्तिकर्ताको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ ।
ललितपुर । जनावरको शरीरको कुनै पनि अËका आधारमा त्यो कुन क्षेत्रको जनावर हो, अब सजिलै छुट्याउन सकिने भएको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गत वर्षबाट जनावरको डिएनए परीक्षण शुरु गरेपछि कुन जनावरको अË हो भन्ने मात्रै होइन उनको जनावर हो भन्ने समेत छुट्याउन सकिने भएकोे जनाएको छ । जनावर कुन क्षेत्रकोे छुट्याउन सक्दा आन्तरिक चोरी हो वा अन्तर्राष्ट्रिय चोरी भन्ने छुट्टिने प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक जीवनप्रसाद रिजालले बताए । उनले भने, ‘यसले गर्दा जनावरको चोरी शिकारी गर्नेलाई कारवाही गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ जनावरको डिएनए परीक्षणका लागि मुद्दा आउने क्रम बढेको छ ।
प्रयोगशालामा केही समय पहिले एउटा हात्तीको पुच्छर परीक्षणका लागि आएको थियो । पुच्छर एशियाको हात्तीको भएको परीक्षणपछि पत्ता लाग्यो । प्रयोगशालामा जनावरका विभिन्न अË परीक्षणका लागि आइरहेका छन् । उनी भन्छन्,‘पहिले हामी कुन जनावरको अË हो भन्नेमा मात्रै केन्द्रित थियौँ भने अहिले कुन क्षेत्रको भन्ने पनि हेर्छौं ।’
छिमेकी मुलुकका जनावरका कतिपय गुण मिल्ने हुनाले कुन क्षेत्रको हो भन्ने नछुट्टिने उनले बताए । उनले भने नेपाल र भारतमा पाइने हात्ती झण्डै उस्तै हुनाले छुट्याउन गाह्रो छ । तेस्रो मुलुकको जनावर भने सजिलै छुटिन्छ । प्रयोगशालामा अर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण शुरु भएको हो । पहिलो वर्षमा विभिन्न निकायबाट ५८ वटा मुद्दाका ३०२ वटा नमूना परीक्षणका लागि आएका थिए । प्रयोगशालामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, निकुञ्ज सैनिक गणलगायतका स्थानबाट जनावरको परीक्षण गर्न मुद्दा आइरहेका छन् ।
काठमाडौँ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी आसपासका मुलुकको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ ।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स वाहेक दक्षिण एसियाली शिखर सम्मेलन (सार्क) मा पाँच सदस्य राष्ट्र नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, श्रीलङ्का, अनि सार्क बाहिरका थाइल्यान्ड र म्यानमार गरी सात राष्ट्रहरूको समूह बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका सात वटै बिमस्टेक मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् ।
बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन चार वर्षअघि म्यानमारमा भएको थियो । सो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सम्मेलनबाट बिमस्टेकको नेतृत्व नेपालले पाएको थियो ।
सल्लेरी । फाप्लु बजारको घरघरबाट निस्केको ढल खोलामा मिसाउँदा बजारभन्दा तल रहेको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–४ फाप्लुको दलित बस्ती दुर्गन्धित भएको छ । बजारको ढल पसेपछि ढल व्यवस्थापनका लागि स्थानीयवासीले पटक पटक माग गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नएको गुनासो गरेका छन् । घर नजिकैको खोलामा दिसा सहितको ढलका कारण दुर्गन्धले विभिन्न खालको रोग फैलिएकोले स्थानीयवासी बिरामी परेको समेत बताउँछन् ।
१६ घरधुरी भएको दलित परिवारले अहिले खानेपानीको मुहान नजिकै ढल मिसिएको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्् । नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष दावागेलु पाख्रिन ढल व्यवस्थापनका लागि रकम अभाव रहेको बताउछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ सब डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुल प्रसाद शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय जिल्लामा नरहने भएकाले ढल व्यवस्थापनको काम नगरपालिकाले गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
लिवाङ । रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङ बजारमा अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि सी.सी.टी.भी. क्यामेराबाट निगरानी गरिने भएको छ । अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले उक्त क्यामेरा जडान गरिएको हो ।
बजार क्षेत्रको दैनिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाटै निगरानी हुने गरी जडान गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुँयालले बताए ।
रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, होटल व्यवसायी सङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, विभिन्न बैङ्क र लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनको संयुक्त लागतमा सदरमुकामका विभिन्न स्थानमा १० वटा सी.सी.टी.भी. क्यामेरा जडान गरिएको छ । ती क्यामेरामध्ये चार वटा चारैतिर घुम्ने र छ वटा एकैतिर रहने खालका छन् । टुँडिखेल क्षेत्रमा तीन वटा, जनता बैङ्क अगाडि लोकतान्त्रिक चोकमा, बीच बजारमा, पिपल चौतारामा सात्ताले खोलामा, शिवालय मन्दिरमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोकामा एक–एक वटा क्यामेरा रहेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाममा विभिन्न क्षेत्रका मानिसको आवतजावत हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न तथा सामाजिक विकृति रोक्न क्यामेरा जडान गरिएको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले बताए । ती क्यामेराका लागि उक्त नगरपालिकाबाट सात लाख र अन्य निकायबाट ११ लाख ६३ हजार ब्यहोरिएको उनले जानकारी दिए ।
तुलसीपुर । किसानले रोपेको एक महिना नबित्दै धानबालीमा (मरुवा) रोग र गबारोको सङ्क्रमण देखापरेकोे छ । यस्तो रोग देखा परेपछि किसानहरू उत्पादन घट्ने चिन्तामा परेका छन् । कहिले पानी अभाव त कहिले रोगको चिन्ताले वर्षेनी सताउने गरेकामा यस वर्ष पनि समयमै खेती पनि भएन । अहिले आएर गबारो र ब्लाष्टको सङ्क्रमणले धानबाली सखाप पार्न थालेको सथानिय किसानहरू बताउँछन् । धानमा रोग देखा परेपछि दिनहुँ किसान बजारका एग्रोभेट, कृषि सेवा केन्द्रमा आउने गरेका छन् । पश्चिम दाङका बाघमारे, शान्तिनगर, पवननगर, फूलबारी गोलटाकुरी, हलवार, मानपुर, टरिगाउँ, डुरुवाका विभिन्न वडाबाट किसान कृषि सेवा केन्द्र र तुलसीपुरका एग्रोभेटमा उपचारको उपाय खोज्दै आउने गरेका छन् । धेरैजसो किसानका धानबालीमा गबारो र ब्लाष्ट रोग देखा परेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि सेवा केन्द्रका प्रमुख तिलकबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनले कतैकतै भने जिङ्कको समस्याका कारण खैरो रोग लागेको भन्ने गुनासो आएकाले रोगको प्रकृति हेरेर औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए ।
धेरैजसो हाइब्रेड जातको युएस ३१२ धानमा यो रोग देखा परेको छ । ‘दैनिक आठ÷दश किसान कार्यालयमा आउँछन् समस्या लिएर रोगको नियन्त्रणको उपाय सिकाएर पठाउने गरेका छौँ’–उनले भने । धुलेब्याड राखेका स्थानका धानमा बढी रोग देखिएकाले किसानलाई आगामी वर्ष हिलेब्याड राख्न सल्लाह दिएको प्रमुख केसीले बताए । तुलसीपुरस्थित एग्रीनेपाल प्रालिमा पनि दैनिक ३०जनासम्मले धानको बोट बोकेर आउने गरेको कृषि प्राविधिक माधव केसीले जानकारी जानकारी । ब्लाट रोगका लागि ‘हेक्जाकोनाजोल’ तथा नेटिभो वाण र गबारोका लागि ‘कोलेरो पाइरीफष्ट’ वा साइपरमेथ्रीन साँझ वा बिहान प्रयोग गर्न सल्लाह दिइएको पनि उनले बताए ।
धनगढी । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल, ७ नम्बर प्रदेश समितिले पत्रकार नमराज घानुकमाथि हातपातको घटनाका दोषीलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल ७ नम्बर प्रदेश समितिका संयोजक सुशील ढुङ्गानाले २०७५ साउन २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस सम्बन्धमा भन्नु भएको छ– “२०७५ साउन १७ गते साँझ करिब ७ बजेतिर धनगढीस्थित दिनेश एफ.एम. तथा एस.टी.एस. टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता पत्रकार नवराज धानुकमाथि भएको आक्रमणप्रति प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । फेसबुकमा लेखिएको स्टाटसको विषयमा लिएर विवाद चर्काउदै सार्वजनिक स्थलमै जिम्मेवार व्याक्तिले नै पत्रकारमाथि हातपात गर्नु दुःखद कुरा हो । कसैको कुनै कुराप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार हुँदाहँुदै सार्वजनिक स्थलमा भैतिक आक्रमणमा उत्रिनु कानुनी राज्यको उपहास गरेको हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । पत्रकार नमराज धानुकमाथि हातपातको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत स्थानिय प्रसाशनसँग माग गर्दछौँ ।”
यसैबीच, पत्रकार नवराज धानुकमाथि आक्रमणको घटनाप्रति आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राजमो कैलालीका अध्यक्ष लक्षीराम आर्चायले २०७५ साउन १८ गते नै एक वक्तव्य जारी गर्नु भएको थियो । जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “२०७५ साउन १७ गते साझँको ७ बजेको समयमा दिनेश एफएमको तातो बहसका सञ्चालक तथा एस.टी.एस. टेलिभिजनबाट विशेष कुराकानी कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकार नवराज धानुकमाथि जिल्ला खेलकुद विकास समिति कैलालीका अध्यक्ष दिपक सिंहले आक्रमण गरेका छन्, जुन घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको कैलाली जिल्ला समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
सरकारको नियुक्तिबाट खेलकुद विकास समिति कैलालीको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट यस खालको गुण्डागर्दी शैली र रवैया अपनाउनु आफैमा खेदजनक छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको बोल्न पाउने, लेख्न पाउने र स्वतन्त्रतापूर्वक हिड्डुल गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर पछिल्लो पटक सत्ता र सरकारमा रहेका व्यक्ति र तिनका पार्टीका मान्छेहरूबाट सत्ताको बलमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानको विकास भइरहेको देखिन्छ । यस खलको प्रवृतिलाई समयमै सच्याउन सकिएन भने जनताले ठुलो बलिदानी र अर्थक सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिहन् उठ्न सक्छ ।
नवराज धानुक एक जना पत्रकार थिए, जसले देशको संविधान, कानुन बुझेको छ, जो जनताका अधिकारप्रति सचेत छ, जसले समाजमा हुने बेथिती, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमाथि दैनिक आवाज उठाइरहेका थिए । उनीमाथि दिनदहाडै धनगढीको मुख्य बजारमा आक्रमण हुन्छ, मार्ने धम्की दिइन्छ भने आम मानिसको हालत के होला ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यसखालको गुडागर्दी शैलीप्रति हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछ ।
पत्रकार नवराज धानुकमाथि गुण्डागर्दी शैलीमा आक्रमण गर्ने दिपक सिंहमाथि कडा कानुनी कार्वाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ, साथै पत्रकार नवराज धानुकको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति बागलुङले प्लास्टिक एनिमिया पीडित नेपाल प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल, बागलुङ शाखाका सचिव तथा पत्रकार महासङ्घ बागलुङका कोषाध्यक्ष विजय रानाको उपचारको लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौँको मीन भवनस्थित सिभिल सर्भिस अस्पतालमा उपचाररत पत्रकार रानालाई राजमो बागलुङका अध्यक्ष अमर थापा र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र ढुङ्गानाले अस्पताल परिसरमै पुगेर २०७५ साउन २० गते ७७ हजार नगद रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।
पत्रकार राना प्लाष्टिक एनिमियाबाट पीडित भएको पत्ता लागेपछि विगत एक महिनादेखि सो अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनु भएको थियो । डाक्टरहरूका अनुसार अहिले पत्रकार रानाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गइरहेको छ । अहिले उहाँ सामान्य काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनु हुन्छ । एप्लास्टिक एनोमिया रोगको उपचार गर्न पत्रकार रानालाई झण्डै ३० लाखभन्दा बढी लाग्ने भएको छ । पत्रकार रानाको उपचारका लागि रकमको अभाव नहोस् भनी रकम सहयोग गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी गराउनु भयो । रानाको उपचारका लागि हालसम्म १९ लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको परिवारले जनाएको छ । अस्पताल श्रोतका अनुसार एप्लास्टिक एनेमियाको औषधि अत्यन्त महङ्गो हुने भएकाले थप १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने बताइएको छ । – सुमन थापा
ढाका । बङ्गलादेशमा भइरहेको विद्यार्थीहरूको व्यापक प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न आइतबारदेखि सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तीव्र गतिको एउटा सवारी साधनको ठक्करबाट आफ्ना दुई जना साथीको मृत्यु भएपछि सुरक्षित यातायातको माग गर्दै बङ्लादेशको राजधानी ढाकाका कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । ढाका नजिकैको जिगाताला भन्ने ठाउँमा शनिबार भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि कम्तीमा १०० जना घाइते भएका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । देशको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अखबार प्रोथोम आलोले पनि प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भएसँगै शनिबार अबेरदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको छ । (एजेन्सी)
इस्लामावाद । पाकिस्तानी एक विशेष अदालतले पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ विरुद्धको राजद्रोह मुद्दालाई यही अगस्ट २०पछि पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । लाहोर उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यवार अली, बलोचिस्तान उच्च अदालतका न्यायाधीश ताहिरा सरदार र सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजार अकबरले उक्त मुद्दालाई हेर्ने बताइएको छ ।
पाकिस्तानी मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) को सरकारले २०१३ मा दर्ता गराएको मुद्दामा मुशर्रफलाई २००७ मा सङ्कटकालको घोषणा गर्दा अवैध रूपमा सेनाको सहयोगमा देशको संविधानलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाइएको छ । मुशुर्रफको नाम देश बाहिर भ्रमण गर्न नपाउने सूचीबाट हटेपछि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उहाँ दुबई प्रस्थान गरेपछि उक्त मुद्दा २०१६देखि विचाराधीन अवस्थामा रहँदै आएको थियो । मुशर्रफको अनुपस्थितिमा उक्त मुद्दा प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकिएको हो । विशेष अदालतले मुशर्रफलाई दोषी घोषणा गरेको र उनको सम्पत्ति जफत गर्न भनिएको भए पनि अदालती कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अभियोग लगाइएको भने थिएन । मुशर्रफलाई पाकिस्तान फर्कने अन्तिम पटक मौका दिइए पनि उनी स्वदेश नआएकाले न्यायालयद्वारा उनको राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानीलाई निषेध गर्न आग्रह गरिएको छ । (एजेन्सी)
जकार्ता । इन्डोनेसियाको लोकप्रिय पर्यटकीय प्रान्त लोम्बोकमा आइतबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी ८० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । छिमेकी बाली समेत हल्लिएको यस्तै भूकम्पमा परेर गत साता लोम्बोकमा एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । स्थानीय अधिकारीका अनुसार भूकम्पको धक्काबाट बालीको डेनपसारसम्मका भवनका साथै डिपार्टमेन्ट स्टोर र विमानस्थलको टर्मिनलमा क्षति पुगेको छ ।
बालीमा मानिसहरू घरबाट चिच्याउँदै बाहिर निस्केका थिए । लोम्बोकमा सेना र अन्य उद्धारकर्ताले घाइतेलाई स्ट्रेचरमा राखेर सुरक्षित स्थलमा पुर्‍याएका थिए । राष्ट्रिय बिपत् एजेन्सीका प्रवक्ता सुटोपो पुर्वोले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८२ पुगेको र अन्य सयौँ व्यक्ति घाइते भएको जानकारी दिए । “हजारौँ घरमा क्षति पुगेको छ र अधिकांश मानिसको मृत्यु भत्किएका घरले पुरिएर भएको हो” उनले भने । लोम्बोक जिल्लाको उत्तरमा सबैभन्दा बढी ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार ७.० म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्प आइतबार साँझ गएको र भूकम्पको केन्द्र उत्तरी लोम्बोक रहेको छ । भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब १०.५ किलोमिटर मुनि रहेको थियो । इन्डोनेसियाका मौसम विज्ञान विभागले समुद्री सतहको अध्ययनपछि सुनामीको खतरा नरहेको जनाएको छ । त्रसित मानिसहरू रातारात अग्ला सुरक्षित स्थानहरूमा पुगेका थिए । बाली र लोम्बोकको विमानस्थल पूर्ववत रूपमै आइतबार रातिदेखि सञ्चालनमा रहेका छन् । भूकम्प आएको आधा घण्टा विमानस्थलमा पनि विद्युत कटौती भएका कारण अन्यौल छाएको थियो ।
यही क्षेत्रमा गत साता आएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले १६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै घरहरू भत्किएका थिए । प्रशान्त क्षेत्रीय बेसिनमा अवस्थित इन्डोनेसिया ज्वालामुखी र फल्ट लाइनका कारण भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ । डिसेम्बर २००४ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ९.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पले शक्तिशाली सुनामी आएको थियो, जसका कारण एक दर्जन तटीय मुलुकका दुई लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । (एजेन्सी)
जेनेभा । बिस यात्रु सहित स्विटजरल्यान्डको दक्षिणी क्षेत्र टिसिनो विमानस्थलबाट जुरिच नजिकै रहेको ड्युवेन्डर्फ सैनिक विमानस्थलका लागि शनिबार दिउसो उडेको विमानमा रहेका चालक दलका सदस्य सहित सबै यात्रुको मृत्यु भएको यहाँको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । आइतबार दिउसो एक पत्रकार सम्मेलनमा स्विटजरल्यान्ड प्रहरीका प्रवक्ता अनिता सेन्टीले बताए । विमानमा रहेका सबैजनाको मृत्यु भएको दुखद खबरको पुष्टि भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको वर्ष १९३९ मा जर्मनीमा बनेको स्विस वायुसेनासँग आबद्धता रहेको जेयू–एअरको ऐतिहासिक महत्वको द जङ्कर, जे.यू. ५२ एचबी–एचओटी विमानमा चालक दलका तीन सदस्य र १७ यात्रु लिएर पिज सेगनास हिमाल क्षेत्रमा उडिरहेका समय शनिबार दुर्घटनाग्रस्त भएको स्विटजरल्यान्डको ए.टी.एस. न्युज एजेन्सीले जनाएको थियो । विमान दुई हजार ५०० मिटरको उचाइमा रहेका समय दुर्घटनाग्रस्त भएको एटिएसले जनाएको हो ।
एक पत्रिकाले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ– “विमान १८० डिग्री दक्षिणतर्फ मोडिएपछि चट्टानसरि जमिनमा खसेको थियो ।” विमानको भग्नावशेष हिमाली क्षेत्रको एकान्त जङ्गलमा सानो क्षेत्रमा छरिएको बताउँदै विमान दुर्घटनाको कारण विष्फोटन नहुन सक्ने सङ्केत देखिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । (एजेन्सी)
वासिङटन । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई लक्षित गरी भएको भनिएको ड्रोन आक्रमणमा ‘अमेरिकी सरकारको सम्लग्नता’ नरहेको अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले बताएका छन् ।
अमेरिकी फक्स टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै आक्रमणमा अमेरिकी सम्लग्नता नरहेको बोल्टनले बताएका हुन् । बोल्टनले घटनाप्रति शङ्का गर्दै भने– “घटना भेनेजुयलाको मदुरो सरकारद्वारा आफै रचेको प्रपञ्च वा अन्य केही भएको हुन सक्छ ।” अमेरिकी संलग्नतालाई नकार्दै बोल्टनले भने– “यदि भेनेजुयलासँग घटनामा अमेरिकी संलग्नता रहेको प्रष्ट सूचना छ भने यसको हामीले गम्भीरता साथ हेर्नेछौँँ ।” राष्ट्रपति मदुरोले आक्रमणलाई हत्या प्रयासमा कोलम्बियाको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए, यद्यपि आक्रमणको एक भूमिगत विद्रोही समूहले जिम्मेवारी लिएको थियो । बोल्टनले भेनेजुयलामा रहेको अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतलाई सम्पर्क गरेको बताउँदै आफ्नो राजदूतावास र यसमा कार्यरत कर्मचारी सबै सकुशल रहेको कार्यवाहक राजदूतले बताएको जानकारी समेत टेलिभिजन मार्फत् गराए ।
भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिले राजधानी काराकस सैन्य प्रदर्शनपछिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मदुरोलाई ड्रोनको सहयोगमा विष्फोट गरी आक्रमण प्रयास गरिएको थियो । तर उक्त घटनामा राष्ट्रपतिलाई कुनै चोट नलागेको बताइएको छ । राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ खटिएका केही सैनिक भने आक्रमणमा घाइते भएका थिए । (एजेन्सी)
बुटवल । भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक युवकलाई प्रदेश सभा सांसद, प्युुठान रूपन्देही सम्पर्क मञ्च र रोट्याक्ट क्लब अफ भैरहवाले सहयोग गर्ने भएका छन् । १६ दिन अगाडिदेखि आई.सी.यू. कक्षमा उपचार गराइरहेका प्युठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका गोठिवाङका डोर बहादुर थापालाई उपचार गराउने आर्थिक क्षभता नभएपछि विभिन्न संस्था र सांसदहरूले सहयोग गर्ने भएका हुन ।
२०७५ साउन १७ गते प्रदेस सभा सांसद, हरि रिजाल, तारा जिसी, सन्तोष पाण्डे, प्युठान–रूपन्देही सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष पदम बहादुर जिसी सहित पदाधिकारीको टोलीले अस्पताल प्रशासनसँग भेटघाट गरी सहयोगको आग्रह गरेको छ । सांसदहरूले अस्पताललाई उपचारमा आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।
अस्पताललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि अस्पतालले डोर बहादुरका आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पाइएकाले सक्दो सहयोग गरिने कोडिनेटर तेज कुमार केसीले प्रतिबद्वता जनाएका छन् ।
आर्थिकको अभावले बिरामीलाई घर फर्काउन लागेको अवस्थामा रोट्याक्ट क्लब अफ भैरहवाले आर्थिक सहयोग गरेर उपचार गराउँदै आएको थियो । क्लबका अध्यक्ष माधव न्यौपानेको सक्रियतामा पीडित डोर बहादुरको उपचारका लागि क्लवले ५० हजार एक सय पाँच रूपैया सहयोग गरेको छ । अझै पनि डोर बहादुरको जीव रक्षाका लागि सहयोग जुटाएर आर्थिक रूपले सहयोग गरिने क्लवका अध्यक्ष माधव न्यौपानेले बताए ।
आई.सी.यू. मा राखेर उपचार गराउँदै दैनिक २०देखि २५ हजार खर्च हुने र अहिलेसम्म सात लाख बढी खर्च भइसकेपछि थप उपचार गराउन नसक्ने भएपछि डोर बहादुरको बिजुला थापाले सहयोगको याचना गरेकी छन् । आयश्रोत हुँदै नभएका ४१ वर्षिय डोर बहादुरको जीवन रक्षाका लागि सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ ।
रुखबाट लडेपछि सख्त घाइते भएका श्रीमानलाई बचाउनका लागि उपचार खर्च जुटाउन बेचिएको र उक्त पैसाले उपचार गर्न नपुगेको सहयोग मागिएको डोर बहादुरकी श्रीमती बिजुला थापाले गुनासो गरेकी छन् । – श्यामलाल पोखरेल
काठमाडौँ । एन.आई.सी. एसिया बैङ्क लिमिटेडले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैङ्कास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार अब यस बैङ्कका ग्राहकले मुलुकभर फैलिएका बैङ्कको दुई सय ३३ वटै शाखाबाट सहज रूपमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जिवन बिमा पोलिसीहरू खरिद गर्न सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा बैङ्ककोतर्फबाट बैङ्कका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीकोतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैबीच, सेवाग्राहीहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिने उद्देश्यले यस एन.आई.सी. एसिया क्यापिटल लिमिटेडले सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सन्ध्याकालीन काउन्टर मार्फत् सेवाग्राहीले दैनिक कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
क्यू.आर. पेमेन्ट सेवा सुरु
एन.आई.सी. एसिया बैङ्कले शहरी तथा ग्रामीण जिल्लाहरूमा समेत आफ्नो सशक्त उपस्थिति स्थापित गर्नुको साथै विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल बैङकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोे छ । सोही क्रममा बैङ्कले क्यू.आर. पेमेन्ट मार्फत् भुक्तानी आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सेवा बैङ्कको मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरी उपभोग गर्न सक्ने बताइएको छ ।